HIM | Health in Myanmar » 2014 » July
Menopause (2) သွေးမဆုံးခင်၊ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂)
Hormone therapy ဟော်မုန်းပေးနည်းမှာ Estrogen နဲ့ Progesterone ၂ မျိုးပေးတာရှိတယ်။ Hot flashes မျက်နှာ နီမြန်းတာ နဲ့ Vaginal dryness (ဗဂျိုင်းနား) ခြောက်သွေ့တာအတွက် ကောင်းတယ်။ တာရှည် ပေးလို့တော့ မကောင်းပြန်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Heart attack နှလုံး (အတက်ခ်) ရတာ၊ Stroke (ဆထုပ်ခ်) ဖြစ်တာ၊ Breast cancer ရင်သား-ကင်ဆာတွေ ပိုဖြစ်စေနိုင်တာ Estrogen ကြောင့် ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Dr Than Aung is the new Minister of Health. A former director of the Military Medical Corps,aclose associate and confidante of Senior General Than Shwe. You can anonymously make other comments about him at hiv.information.for.myanmar@gmail.com and they will be posted. Jamie
Injecting drugs hasadirect role in HIV transmission
Methamphetamine use has an ambivalent effect on sexual behaviour. It may cause increases in sexual behaviour and may cause decreases in sexual behaviour. It may be correlated with HIV acquisition and transmission though it may not playadirect role in either. It is important that we keep the spotlight on the real, proven, and […]
It would be nice to see stockouts in Myanmar receive as much publicity as this … Jamie ++++++++++++++++++ PRESS RELEASE Stock-outs of lifesaving HIV drugs now in Bangkok – but only if you’re poor. The HIV Foundation 29 July 2014 BANGKOK: Thais living with HIV from lower socio-economic backgrounds are being turned away from some […]
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, STD, လူငယ်, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆေးစာမဖြေခင် အနမ်းဋီကာချဲ့ပါရစေ။ စာတပုဒ်ရေးထားတာရှိပေမဲ့ အများဖတ်စရာအနေနဲ့တော့ မတင်လိုပါ။ လျှာမပါဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတာကို Light Kissing ခေါ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို Lip kiss လို့ ပြောတာများတယ်။ တရားဝင်ခေါ်ကြတာက French kiss ဖြစ်ပါတယ်။ Deep Kissing လို့သတ်မှတ်တယ်။ အထဲထိနက်တယ်။ ဒီနမ်းနည်းမှာ တယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ နောက် တယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း + လျှာနဲ့ ထိတွေ့မှုလုပ်ကြတယ်။ အပြန်အလှန်သဘောရှိနိုင်တယ်။ တဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ စိတ်လိုလက်ရ ရှိလာနိုင်တယ်။
Hepatitis C (စီ) ပိုး
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, TB, ပညာပေး, ဆေးဝါး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV ပါရှိနေသူဆိုရင် Acute infection စောစောပိုင်းကတည်းက ကုရင်ကောင်းတယ်။ Mild liver disease အသဲရောဂါ နည်းနည်းလေးသာ ရှိနေသူတွေ ဆေး မလိုသေးပါ။ Moderate liver damage အသဲရောဂါ အသင့်အတင့် ဆိုးလာသူတွေက Cirrhosis အသဲခြောက်တာ ဆက်ဖြစ်စရာများလို့ ဆေးကုသ ရမယ်။ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးနဲ့ ရမဲ့အကျိုး ချိန်ဆရမယ်။ စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ Decompensated cirrhosis အသဲခြောက်နေပြီဆိုရင် Liver transplant အသဲ အစားထိုးတာ တခုဘဲ လုပ်နိုင်တယ်။
Disappointing AIDS 2014
AIDS 2014 in Melbourne was disappointing for those who want to learn more about HIV in Myanmar. There were only sixteen abstracts, mostly with old information. And there wasalarge Myanmar component in one session on ‘Southeast Asia’ withaDeputy Minister presentation and UNAIDS staff presentation but little concrete information. You can look […]
အသည်းရောင်ရောဂါကို HIV ပုံစံသုံးပြီး နှိမ်နင်းနိုင်မလား
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, WHO, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အိန္ဒိယမှာ HIV surveillance centres စောင့်ကြည့်စင်တာပေါင်း ၁၇ဝဝဝ ရှိတာကို အသည်းရောင်ရောဂါတွေ အတွက်ပါ အသုံးပြုသင့်တယ်လို့လဲ တခြားပညာရှင်တဦးက အကြံပေးပါတယ်။ အတူနေသူတယောက်မှာ (ဘီ)၊ (စီ) ပိုးရှိနေရင် အတူနေသူတွေကို ကျကျနနစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမယ်။ တခြားပညာရှင်တဦးက ရောဂါတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေက မှန်ကန် လက်ခံနိုင်စေရမယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ခေါင်းပြန်ထောင်လာမှာ စိုးရိမ်နေရသော အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, STD, WHO, ကွန်ဒုံး
အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်သူနှင့် လိင်ဆက်ဆံလျှင် ကွန်ဒုံးသုံးရန် ပညာပေးခြင်း၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ စမ်းသပ် စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိသူများနှင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ အလွန်များသူများကို အေအာတီဆေးများ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ဆေးထိုးအပ်များ မျှဝေ မသုံးစွဲအောင် ပညာပေးခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အသစ် ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက လမ်းညွှန်သည်။
Oral practice and STDs ဆက်ဆံရာမှာ ပါးစပ်သုံးခြင်း
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: STD, နည်းလမ်း, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါရဘို့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အန္တရာယ်နည်းတယ်။ ဗဂျိုင်းနားနဲ့ စအိုလမ်းတွေထက် နည်းတယ်။ ကူးစက်ဘို့ မဖြစ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ Latex လေးတက်စ် ကွန်ဒွမ်၊ Polyurethane ပေါ်လီယူရီသိန်း ကွန်ဒွမ်၊ အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒွမ်တွေကနေ ကူးစက်ဘို့ အခွင့်အလမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ပြုလုပ်ပေးသူရဲ့ ပါးစပ်နေရာမှာ ပြတ်ရှတာ၊ အနာအဆာရှိတာဆိုရင် ပိုပြီးကူးစက်လာစေနိုင်တယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, UNAIDS, အခွင့်အရေး
သုတေသနများက ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ မျိုးဗီဇကိုယူကာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဒဏ် ခံနိုင်သည့် မျိုးဗီဇများအဖြစ် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပြောင်းလဲပြီး နောက် ဝေဒနာရှင်ထံ ထည့် သွင်းပေးကာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို တိုက်မည့်နည်းကိုလည်း စမ်းသပ်နေကြပြီ။ ထိရောက်သော လက်တွေ့နည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပေါ်လာဖို့ အချိန်ယူ လုပ်ကိုင်ဖို့တော့ လိုသေးသည်။ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းဖြင့်တော့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို မလွှဲမသွေ တိုက်ဖျက်နိုင်လာလိမ့်မည်။